Ebihani.com - Page4of 37 - news
निर्देशकले यस्तो ला,जमर्दो कुरा गरेपछी…बलिउड नायिका प्रियंका चोपडालाई
4 days ago	रोचक 0
बलिउडका साथै हलिउडमा पनि आफ्नो स्थान बनाउने ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडाको एक चर्चित नायिका हुन् । प्रियंका चोपडाले जुन सफलता हात पारेकी छिन् त्यो हरेक युवतीका लागि प्रेरणादायी छ।प्रियंका चोपडाको जन्म जमशेदपुरमा १८ जुलाइमा भएको थियो । उनकी आमा मधु चोपडा र पिता अशोक चोपडा आर्मीमा डाक्टर थिए । एक …
शाहरुखलाई देखेर धरधरती रुदै छोरा आर्यनले भने – बाबा जेलको खाना मिठो लागेन
जेन्सी । शाहरुख खान छोरा आर्यनलाई भेट्न जेलमा गए। ड्र’ग्स प्रकरणमा पक्राउ परेका आर्यन र शाहरुखबीच करिब १५ मिनेट कुराकानी भयो बलिउड सञ्चारमाध्यमका अनुसार बुबालाई देख्नेबित्तिकै आर्यन ग्वाँग्वाँ रोएका थिए। आर्थर रोड जेलको स्रोतका अनुसार उनीहरु दुबैजना भेटमा भावुक भएका थिए। शाहरुखले छोरालाई भेट्दै गर्दा २ जना जार्ड त्यहाँ तैनाथ …
हत्याको कोणबाट पनि जाँच चुँडिएपछि ८० फिट तल खसेर महिलाको मृत्यु
काठकाडौं। साहसिक खेलकी सौखिन एक महिलाको बन्जीजम्पका क्रममा ज्यान गएको छ । यी महिलाले बन्जीजम्प गर्ने क्रममा उनको खुट्टा बाँधिएको डोरी चुँडिएपछि ८० फिट तल खसेर उनको मृत्यु भएको हो । यो घटनाको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा महिलाले छतमा बन्जी जम्पको तयारी गरिरहेको र उनी हाम्फालेपछि दर्दनाक …
4 days ago	विचार 0
संसारको सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी गुगलले उनलाई जागिरको प्रस्ताव राखेको छ। यो केटी भागलपुर जिल्ला को सुल्तानगंज मा बस्छिन्, उनको नाम शालिनी झा हो। शालिनीका हजुरबुबा मुरारका कलेजको रसायन शास्त्र विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। प्रो उमेश्वर झा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जबकि उनका पिता का नाम कामेश्वर झा हो। शालिनी झा हाल दिल्ली …
काठमाडौं । हामिलाई थाहा नभएका विश्वमा धेरै अनौठा जीवहरु छन् । कहिलेकाही नसोचेका जीवहरु एक्कासी देखिने गर्छन् । यस्तै समुन्द्रको छेउमा एक अनौठो जीव फेला परेको छ ।उक्त अनौठो जीवको तस्बिर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । त्यो अनौठो समुन्द्री जीवको नाम हो गोजनेक बार्नेकल । यो जीव …
सुन्दर अनि सफा अनुहार सबैको चाहना हुन्छ । तर विविध कारणले सुन्दरतामा कमजोरी पनि आउँछ । सुन्दरता कमजोर गराउने कारण मध्ये नाकको बाहिर पटी छालामा देखिने बढी चिल्लोपना वा स–साना काला वा सेता खिल हुन् । नाकमा चिल्लो वा यस्ता खिलहरु के कारणले आउछ ? र कसरी आउन नदिने वा …
केही दिन अघि ताप्लेजुङमा एक झाक्री कृष्ण घतानि को सर्पले टोकेर मृ’त्यु भएको थियो । ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्र नभै अन्य ठाउँमा समेत चर्चामा रहेका झाक्री बिरामिलाई झारफुक गर्दै आएका थिए । हुनत अहिलेको पुस्ताले धामी झाक्री इत्यादिमा खासै बिश्वास राख्ने गरेको पाइदैन । यसलाई एक अन्धबिश्वास भनेर व्याख्या गर्ने गर्दछन …
यसरि रुदै छिन् ९ महिने नानि आमाको काखमा हुनुपर्नेमा बुवाको ढाडमा,कठै बिचरा,यतिसम्म भएको रहेछ (भिडियो हेर्नुस् )
नौ महिनाको यति सानो छोरी जस्ले आमानै चिन्दैन त्यहि छोरिलाई छोडेर आमा घरबाट भागिन् ।प्रेम बिवाह गरेको जोडि दुई बर्षमै अन्ततः छुट्टिन पुग्यो। राम्रोसन बोलिपनि नफुटेकि यी नानिले आमा शब्दसम्म उच्चाहरण गर्न नपाउदै आमाको अनुहार नै चिन्न नपाउदै हिडिदिनुले शो परिवारलाई हदसम्मको पीडा दिएको छ । आमाको काखमा रमाउने आमाकै …
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलरको बिक्री मुल्य १२२.०१ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, क्रय मुल्य भने १२२.६१ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरि अन्य मुलुकका मुद्राको विनिमयदर यस्तो छः
यी बालिकाले २० रुपैयाँको लागि बाढीमा हाम्फा’लिन (भिडियो सहित)
मृ`त्युसंग खेल्छन् यि बच्चा र यिनीहरूको ज्या`नको मुल्य हो मात्र ५० रुपैया । कसरी यो सानो सानो बच्चाहरु मृ त्यु सँग खेलिरहेका छन् ? वपन्ती नदीमा ज्या`नको बाजी राखेर पौडी खेलिरहेका छन् । मृ`त्युको छलाङ खुलेयाम भैराछ ।यसलाई रोक्नेवाला टाढा टाढा सम्म पनि कोई देखिँदैन । यो १-२ चोटी को …